तपाईं फ्रान्स मा टिप छ? फ्रान्सेली टिपिंग शिष्टाचार बुझ्नुहोस्।
घर / आवास, बारहरू, bartender, द्वारपाल, चालकहरुको, युरोप, फ्रान्स, निर्देशित भ्रमणहरू, होटल, घरेलू, भरियाहरू, क्षेत्र, रेस्टुरेन्ट, सर्भर, ट्याक्सीहरू, टूर गाईडहरू, टूर गाईडहरू, पर्यटन, Uber, वेटर / वेटरिस / फ्रान्समा टिपिंग: के तपाईं फ्रान्समा सल्लाह दिनुहुन्छ?
1 फ्रान्समा टिपिंग: के तपाईं फ्रान्समा सल्लाह दिनुहुन्छ?
1.1 फ्रान्समा रेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंग
1.1.1 के तपाईं फ्रान्समा रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्स दिनुहुन्छ?
1.1.2 तपाईंलाई थाँहा थियो?
1.2 फ्रान्समा उबेर ड्राइभरहरू टिपिंग गर्दै
1.2.1 अब टिपिंगमा: के तपाईं फ्रान्समा उबर ड्राइभरहरूको टिप्स दिनुहुन्छ?
1.2.2 तपाईंलाई थाँहा थियो?
1.3 फ्रान्सको होटेलमा टिपिंग
गत वर्ष .89.4 .XNUMX।। मिलियन आगन्तुकहरूको साथ फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको लागि शीर्ष गन्तव्य हो, धेरै जसो उनीहरू पेरिस भ्रमण गर्दैछन्। दुर्भाग्यवस, धेरै आगन्तुकहरू बुझ्दैनन् कि फ्रान्समा कसलाई सल्लाह दिने र यदि उनीहरूले कति टिप्स दिने। यो लेखले तपाईंलाई फ्रान्सेली टिपिंग शिष्टाचार बुझ्न र ट्रिपिंग अप्ठ्यारोबाट जोगिन मद्दत गर्दछ।
के तपाइँ फ्रान्स मा टिप गर्न आवश्यक छ? सामान्यतया, टिप ज्यादातर अवस्थाहरूमा आवश्यक पर्दैन तर यसको सराहना गरिन्छ।
फ्रान्समा रेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंग
के तपाईं फ्रान्समा रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्स दिनुहुन्छ?
रेस्टुरेन्टहरूमा टिपिंग आवश्यक छैन। रेस्टुरेन्टहरूले एक सरकार अनिवार्य सेवा शुल्क लिन्छन्, सेवा लेबल लेबल गर्दछ, जसले रेष्टुरेन्टहरू उनीहरूको सर्भरहरूलाई जीवित ज्याला तिर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं सानो सेवामा अर्को यूरो सम्म राम्रो सेवाको लागि टिप छोड्न चाहनुहुन्छ वा ठूलो बिलमा केही यूरो थप्न। यसलाई फ्रान्सेलीमा 'डलरबोयर' भनिन्छ जसको शाब्दिक अर्थ हो 'पिउनु' मूल विचारको साथ वेटर आफैले आफैलाई एक पेय किन्नुहोस्।
तपाईं अर्डर गर्न तयार हुँदा वेटरहरूको आँखाहरू समात्नुहोस्। तपाइँको मेनू बन्द र तपाइँको तालिका मा तल राख्नु तपाइँको वेटर को लागी एक उत्कृष्ट संकेत हो कि तपाइँ अर्डर गर्न को लागी तयार हुनुहुन्छ। जब तपाईं आफ्नो खानासँगै सक्नुहुनेछ, तपाईंले बिलको लागि तपाईंको सर्भरलाई सोध्नु पर्छ। यो यस्तो छ किन कि तपाईंलाई बिल नबनाउनुलाई रूखो मानिन्छ किनकि तपाईंले पहिले माग्नुभएन, किनकि यो तपाईंले छोड्नु पर्ने स considered्केतको रूपमा लिइनेछ! जब तपाईं बिल भुक्तान गर्न तयार हुनुहुन्छ, यो काउन्टरमा भुक्तानी गर्न सामान्य हुन्छ।
क्रेडिट कार्ड स्वीकृति फ्रान्सेली रेस्टुरेन्टहरूमा व्यापक छ, तर तिनीहरू जताततै स्वीकार हुँदैनन्। खानुभन्दा पहिले जाँच गर्नुहोस्, क्रेडिट कार्ड स्वीकार नगरेमा साइनेज हुनेछ। यदि यो मामला हो भने तपाईले नगद भुक्तानी गर्नु पर्छ। साथै, अमेरिकी एक्सप्रेस भिसा वा मास्टरकार्ड भन्दा कम व्यापक रूपमा स्वीकार्य छ, त्यसैले प्रविष्ट गर्न अघि अमेरिकन एक्सप्रेस लोगो जाँच गर्नुहोस् यदि त्यसो हो भने तपाईं भुक्तान गर्न चाहानुहुन्छ भने।
फ्रान्सको रेष्टुरेन्टहरूमा ट्याप पानी नि: शुल्क हुन्छ र सामान्यतया तपाईंलाई ठूलो क्याराफामा सेवा गरिन्छ। जब वेटरहरूले तपाईंलाई "के तपाइँ पानी चाहानुहुन्छ" भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसको साँच्चिकै अर्थ हुन्छ "के तपाइँ बोतलबन्द पानी किन्न चाहानुहुन्छ"। के तपाईं पेरिस र बाँकी फ्रान्समा नल पानी पिउन सक्नुहुन्छ? हो, फ्रान्समा पानी पिउन पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ त्यसैले प्राय जसो फ्रान्सेली मानिसहरूले के गर्छन् र पानीको क्याराफको लागि सोध्छन् वा "अन क्याराफे डि'उ"।
फ्रान्समा उबेर ड्राइभरहरू टिपिंग गर्दै
त्यहाँ पेरिस मा उबर छ? फ्रान्स मा कहीं उबर छ? हो त्यहाँ छ!
अब टिपिंगमा: के तपाईं फ्रान्समा उबर ड्राइभरहरूको टिप्स दिनुहुन्छ?
होइन, तपाईंले फ्रान्समा आफ्नो उबर ड्राइभर टिप गर्न आवश्यक छैन। यदि तपाईं आफ्नो उबर ड्राइभर टिप गर्न चाहानुहुन्छ भने, € १ - € २ छोड्नुहोस्।
यदि तपाइँ पेरिस एयरपोर्टबाट ट्याक्सी वा उबर लिने बारे विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् ट्याक्सी दरहरू तोकिएको छ जबकि उबर दरहरू छैनन् तर बुकि when गर्दा तपाइँलाई खुलासा गरिन्छ। चरम समयमा, उबर वृद्धि मूल्य निर्धारण दर ट्याक्सी भन्दा बढि हुन सक्छ, त्यसैले यो तुलना गर्न भुक्तान गर्न सक्दछ! चार्ल्स दे गोल एयरपोर्टबाट पेरिसका लागि निश्चित ट्याक्सी भाँडा दायाँ बैंक (साईनको उत्तरी) मा € €० र बाँया बैंकमा € €। छ। ओर्ली एयरपोर्टबाट भाँडा € €० बाँया बैंक र € €० दायाँ बैंकमा छ। यी भाडाहरू पेरिसमा लागू हुन्छ उचित र उपनगरहरूमा होइन। सधै झैँ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ केवल आधिकारिक ट्याक्सीमा प्रवेश गर्नुभयो जुन तपाइँ ट्याक्सी लाइनमा सामेल भएर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। 'ट्याक्सी' सेवाहरूको कुनै पनि प्रस्तावहरू स्वीकार नगर्नुहोस्।
जे होस् उबेर वा ट्याक्सी प्रयोग गर्नु अक्सर ब्याग भएका मानिसहरूका लागि सुविधाजनक र उत्तम हुन्छ, पेरिसमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस् जब सक्नुहुन्छ। यो एक लागत प्रभावी तरीका हो कि अधिक पेरिस क्षेत्र कवर गर्दछ। यदि तपाईं सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले नियमहरू पहिले बुझ्नुभयो। यदि तपाईं कागज टिकटहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस्लाई पक्रिराख्नुहोस् जबसम्म तपाईं प्रणालीबाट बाहिर जानुहुन्छ, तबसम्म पक्का गर्नुहोस् तपाईंलाई किराया निरीक्षकले जरिवाना गरेनन्।
फ्रान्सको होटेलमा टिपिंग
के तपाईं फ्रान्सको होटेलमा टिप्स दिनुहुन्छ?
फ्रान्समा होटेलमा टिपिंग आवाश्यक पर्दैन, तर विशेष गरी जब स्टाफले तपाईंलाई आफ्नो सामानको साथ सहयोग गर्दछन्। तपाईको झोलाका साथ सहयोगका लागि सुझावहरू प्रत्येक झोलाको लागि € ०.0.50० - € १ हुनुपर्दछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो? फ्रान्समा रेटिंग्स भएका होटलहरूलाई सरकारले यी मूल्या given्कनहरू दिएका छन् र आधिकारिक रूपमा सात विभिन्न कोटीहरू मध्ये एकमा राखिएको छ: कुनै तारा, १ तारा, २ तारा, star तारे, star तारे, star तारा, र दरबारहरू। 'प्यालेस' कोटी २०१० मा सिर्जना गरिएको हो र सायद पहिलो पटक 1 र आज २2को लागि चुनिएको with भन्दा कम सम्मानित छ।
बारहरूbartenderक्याफेहरूदरबारतपाईंलाई थाँहा थियो?युरोपफ्रान्सहोटलहाउसकीपिंगपेरिसभरियाहरूरेस्टुरेन्टट्याक्सीटिपिङसुझावUber आवासबारहरूbartenderद्वारपालचालकहरुकोयुरोपफ्रान्सनिर्देशित भ्रमणहरूहोटलघरेलूभरियाहरूक्षेत्ररेस्टुरेन्टसर्भरट्याक्सीहरूटूर गाईडहरूटूर गाईडहरूपर्यटनUberवेटर / वेटरिस